Aiza Izay Hatezerana Ateraky Ny Fampiasàna Ankizy Ao Iràna? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Aogositra 2016 7:11 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Magyar, Deutsch, বাংলা, فارسی, Ελληνικά, Italiano, English
Ankizy mpiasa tsy fantatra anarana ao Iràna. Sary natolotry ny Fanentanana Iraisampirenena miaro ny Zon'Olombelona ao Iràna
Mijanona foana ho olana miparitaka be manerana izao tontolo izao ny asan'ny ankizy sy ny fanararaotana azy ireny. Mifantoka amin'ny fanararaotana, fanondranana ary ny tsy fandraisana andraikitry ny fanjakàna ny olana, ary lasa fanamby iray ho an'ireo izay miaina any anaty fiarahamonina misalobona tsy ampy mangarahara sy rafitra fanohanana sosialy.
Vao mainka nitombo nahazo vàhana ao Iràna ny fanararaotana ny ankizy, ary mijanona ho tsy nisy fanadihadiana nataon'ireo manampahefana sy ny tontolo ivelany.
Namorona tafiotra tsara petraka hampitombo ny fanararaotana ankizy ao Iràna ireo zavamisy zeopolitika ankehitriny ao Afovoany-Atsinanana sy ny onjan'ireo mpitsoaponenana, mifangaro amin'ireo tsy fahombiazana miely patrana amin'ny resaka fitantanana. Ny toerana misy an'i Iràna ao anaty lalantsaran'ireo firenena rotiky ny ady, ampivadiana amin'ny kolikolim-panjakana sy ny tsy fisian'ny fiahiana sosialy mazava no vao mainka naha-henjana ny olana. Firenena iray mipetraka amin'ny laharana faha-3 raha resaka fanondranana olona no misy an'i Iràna ao anaty lisitry ny Departemantam-panjakàna Amerikàna. Na ny fitondràna Iraniàna izy tenany koa aza dia tafiditra amin'ny raharaha fanondranana olona sy fanararaotana ankizy.
Indrisy, tsy vaovao amin'i Iràna ny fampiasàna ankizy. Ara-tantara dia ireo fianakaviana kely fidirambola saingy maro anaka no mijery ireo taranany ho toy ny loharanonà hery mpamokatra sy fidirambola ho an'ny ankohonana. Amin'ny tranga sasany dia alefan'ireo fianakaviana sahirana any ivelany ny ankizy mba ho mpiasa an-trano any amin'ireo fianakaviana Iraniana manankarena.
Nivoatra anefa ilay olana ankehitriny, nihoatra lavitra ny kolontsaina sy toekarena iray ka lasa fanararaotana sy tsy firaharahiana. Ny 2012, tamin'ny tafa iray nataony tao amin'ny Radio Zamaleh amin'ny teny Persiana, manana ny foibeny ao Amsterdam, notsipihan'i Ali Akbar Esmailpour, izay mitarika ny Fikambanana ho Fiarovana ny Zon'ny Ankizy ho toy ny fanamby voalohany indrindra hiatrehana io olana io ny tsy fahampian'ny torohay sy fandraisana andraikitra :
Ny hany torohay eo am-pelatànana dia ireo antontanisa miresaka ny ankizy miaina an-dalambe, satria hita maso izy ireny, saingy tsy manome ny tena sary feno io.
Nomarihan'i Esmailpour hoe misy tsy fahombiazana ara-drafitra avy amin'ny Ministeran'ny Asa ho fampiharana ireo lalàna momba ny fampiasàna ankizy; tamin'ny filazàna fa “matetika ny ankizy no miasa eo anelanelan'ny 12 sy 16 ora, ary anaty fepetra faran'izay ratsy tsy misy fiarovana na kely aza, na fijerena ny lafiny fahadiovana.”
Araka ny lalàna Iraniàna, voaràra ny fampiasàna ankizy latsaky ny 15 taona, saingy mbola misy fahabangàna iray tavela sy manome vàhana ny fanararaotana ankizy. Marobe ny ankizy latsaky ny 15 taona no matetika miasa an-trano ary tsy anaovan'ireo mpampiasa azy ireny filazàna, nefa mbola iharan'ny fanararaotana sy ny fomba fitondra ratsy ihany. Araka ny tatitra vao haingana navoakan'ireo fikambanana sivily maromaro, navoakan'ny tatitra iray tamin'ny 2011 fa 68.558 ireo ankizy eo anelanelan'ny 10 sy 14 taona no efa miasa ary 696.700 ny eo anelanelan'ny 15 sy 18 taona.
“Olana iray tena odiana tsy hita na lavin'ny governemanta mihitsy aza izy io. Iray amin'ireo zavamisy tena mahatezitra indrindra ary mitaky fifantohan-tsaina sy fandraisana andraikitra avy hatrany ny fampiasàna ankizy,” hoy i Akbar Yazdi, talen'ilay ONG Iraniàna manampy ny ankizy miasa, raha niresaka tamin'ny gazety Iraniàna Financial Tribune amin'ny fiteny Anglisy.
‘Mitomany aho isaky ny mifoha ny maraina’
Tsy voafetra ho amin'ny resaka fampiasàna ankizy monja ilay fampiasàna ankizy. Vinavinaina ho 200.000 eo ny ankizy miaina an-dalambe ao Iràna — ny antsasa-manila amin'io isa io no heverina ho ankizy Afgàna. Marobe amin'ireny no ankizy nandositra ny tokantrano, nandositra toedraharaha sarotra na mpitsoaponenana avy any Afganistàna na Iràka. Matetika ireo ankizy mpitsoaponenana no marefo manokana rehefa any anaty fiarahamonina.
Lahatsoratra iray tamin'ny Martsa 2011, avy amin'ny Ivontoerana Mitatitra momba ny Ady sy ny Fandriampahalemana, fikambanana iray mahaleotena manohana ireo mpanangona vaovao ao an-toerana sy ireo olontsotra mpanao gazety ary ireo mpikatroka mafàna fo any amin'ireo firenena misy fifandonana, no nitatitra fa nisy ankizy Afgàna noraofin'ny polisy ary nalefa niverina any Afganistàna. Ny sasany tamin'ireny ankizy ireny dia tsy mbola tany Afganistàna velively tany aloha tany ary toa tsy fantatry ny ray aman-dreniny akory hoe noroahana.
Nalefa irery niverina tany Afganistàna i Abdul Majid, ankizy Afgàna iray, 12 taona, tsy fantatry ny fianakaviany izay mbola tavela any Iràna akory. “Nodarohan'ny polisy aho,” hoy izy tao anatin'ny tafa iray tany amin'ny tobin'ireo mpitsoaponenana ao Ansar, any amin'ny faritanin'i Herat :
Nanontanian-dry zareo mihitsy aza aho hoe sao mifandray aminà vondrona mpanao herisetra. Nianiana ho fa tsy mifandray na dia iray amin'ireny aza. Farany, noroahan-dry zareo ihany aho afaka valo andro taty aoriana, ary nalefany ho aty Afganistàna.
Iray monja amin'ireo tranga an-jatony manjo ny Afgàna mpitsoaponenana ny tranga mahazo an'i Abdul Majid izay sakànana tsy hahazo torohevitra araka ny lalàna sy roahana hiverina any amin'ny firenena niaviany, zavatra izay tsy ara-dalàna raha ny lalàna iraisampirenena no jerena. Matetika ireo ankizy no voadaroka any ampitazonana azy no sady tsy omena sakafo alohan'ny fandefasana azy ireo hiverina any amin'ny firenena iray izay tsy ahafantarany na iza na iza akory. Sady nitomany i Majid no niteny hoe :
Isankalina aho dia manonofy hoe mikaroka ahy ireo iray tampo amiko sy ny ray aman-dreniko. Mitomany aho isaky ny mifoha ny maraina.
Ankizin'i Iràna, adino
Toerana iray ifamezivezen'ny fanondranana olona eo anelanelan'i Pakistàna, Afganistàna ary ireo Fanjakana ao Golfa ihany koa i Iràna. Araka ny lazain'ny Firenena Mikambana, ho an'ny lalàna Iraniàna, ny zavamarina hoe tsy dia misy atahorana loatra ny fanondranana olona raha oharina amin'ny fanondranana zavamahadomelina dia mahatonga ilay fomba fanao ho “fandraharahàna iray tena mahasarika an'ireo andiany mpanondranana zavamahadomelina mifehy ny làlana famarotana zavamahadomelina any atsimo” (jereo ny pejy fahaefatra amin'ny tatitra momba an'i Iràna, avy amin'ny biraon'ny Firenena Mikambana momba ny Zavamahadomelina sy ny Heloka Bevava).
Voalaza ho nila vaniny tamin'ireo niharan'ny fanondranana ho an'ny filàn'ny nofo ihany koa ny fitondràna Iraniàna, tamin'ny fanaovana ny lazainy hoe “fihetsika tsy araka ny lalàna” miharo fijangajangàna, na eo aza ny zavamisy hoe matetika ireo niharan'izany no niharan'ny fanerena mivantana vokatry ny maha-olona voaondrana azy.
Tohizan'ny politikan'ny fitondràna Iraniàna ny mankahàtra ireo fenitra sy fepetra iraisampirenena, izay vao mainka mampiseho ny fanitsakitsahana tsotra izao ny zon'ny ankizy sy ny firaisana tsikombakomban'ny governemanta amin'ireo mpanondrana olona ao anatin'ny fireneny. Na atao hoe nanatanteraka dingana vitsivitsy aza ny fitondràna mba hiadiana amin'ny fanondranana olona, ny fitondrantenany sy ny fepetra araka ny lalàna dia toa milaza zavatra hafa mifanohitra amin'izany.
Na isan'ny ao anatin'ny Fifanarahana momba ny Zon'ny Ankizy aza i Iràna, mifanohitra tanteraka amin'ireo andinin-dalàna voasoratra ao anatin'ilay fifanarahana ireo politikany, tafiditra amin'izany ireo izay miantoka ny fiarovana ny ankizy tsy manana mpiahy, sy ireo ankizy mpitsoaponenana. Amin'izao fotoana izao dia tsy ao anatin'ilay taridàlan'ny Firenena Mikambana Momba ny Fanondranana natao tamin'ny 2000 ihany koa i Iràna, fifanarahana goavana iray iraisampirenena mifantoka amin'ny fisorohana ny fanondranana olona.
Ny tsy fisian'ny finiavana demaokratika sy ny fangaraharàna ara-piarahamonina dia mahatonga ny fitaterana momba io olana io ho fanamby iray ho an'ireo mpikatroka mafana fo ao anatiny sy ivelan'i Iràna. Ireo Iraniàna mpanao gazety sy ireo mpîkatroka mafàna fo izay nikatsaka ny hiatrika io olana io dia tsy hoe fotsiny niatrika tsy fiarahamiasa nasehon'ny manampahefana, fa niharan'ny fandrahonana sy fisamborana nataon'ireo manampahefana koa. Raha ny olana politika sy iraisampirenena manodidina ilay firenena no ifantohan'ny ankamaroan'izao tontolo izao, mijanona ho olana iray tena tsy hita maso ary adino ny momba ireo ankizy ao Iràna.
Raha hijiery tatitra momba io olana io amin'ny fiteny Persiana, eto tsindriana.